April 2018 – WarkaDalka.com
Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka
April 30, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka
Isniin, April, 30, 2018 (HOL)–Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Guddoomiyaha cusub ee loo doortay Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay Guddoonkii KMG ahaa ee Golaha Shacabka, Guddigii Doorashada iyo dhamaan Xildhibaannada Baarlamaanka sida ay u guteen waajibkooda dastuuriga ah, waxaa uuna […]
Maxmed Mursal oo loo doortay guddoomiyaha Golaha Shacabka
April 30, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Maxmed Mursal oo loo doortay guddoomiyaha Golaha Shacabka
Isniin, April, 30, 2018 (HOL)– Doorasho xiiso badan oo xildhibaannadu la wareeg oo codeyn ah mareyn ayaa ugu danbeyntii waxaa ku guuleystay guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo horay u ahaa Wasiirkii gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa helay codad gaaraya 147, halka musharaxa Ibraahim Isaaq Yaroow uu helay 118 […]
Maxamed Mursal oo loo doortay afhayeenka baarlamanka
April 30, 2018 Warka Dalka
Xildhiban Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee baarlamanka Soomaaliya. Maxamed Mursal, oo ahaa waasiirkii gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya, oo uu iska casilay toddobaadkii tagey, ayaa ka adkaaday musharaxiin dhowr ah oo xilkaas kula tartameysay. Wuxuu wareeggii labaad ee doorashada kaga adkaaday xildhibaan Ibraahim isaaq Yarow. Maxamed Mursal ayaa wareeggii […]
Madaxweyne Farmaajo oo booqanaya Beledweyne
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Safarka madaxweynaha ayaa waxa uu la xiriiraa inuu u kuurgalo degaannada ay saameeyeen daadadka iyo roobabku. Inta badan dadweynihii magaalada Beledweyne ayaa halkaais ka qaxay. Fatahaaddan ayaa saameysay boqolaal kun oo of oo ku nool gobollada uu maro webiga […]
Madaxweynaha Farmaajo oo gaaray magaalada Beledweyne
April 30, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Madaxweynaha Farmaajo oo gaaray magaalada Beledweyne
Isniin, April, 30, 2018 (HOL)–Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo goor dhaw gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dhawaan ay ku dhufatay fatahaad ka dhalatay Wabiga Shabeelle iyo Roobab xoog leh oo ka da’ay gobolka iyo deegaannada ku dhaw dhaw. Wafdiga madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed […]
Afar musharax oo isugu soo haray doorashada guddoomiyaha Golaha Shacabka
April 30, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Afar musharax oo isugu soo haray doorashada guddoomiyaha Golaha Shacabka
Isniin, April, 30, 2018 (HOL) – Waxaa soo dhamaatay wareegii koowaad ee doorashada guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ay ku tartameen ilaa 10 musharax oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa wareega labaad isugu soo haray ilaa Afar Musharax oo kala ah Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo helay 83 cod, Ibraahim Isaaq Yaroow oo helay 69 […]
Wareeggi 1-aad ee doorashada guddoomiyaha baarlamanka oo soo dhammaaday
Waxaa soo dhammaaday wareeggii koowaad ee codbixinta baarlamaanka, waxaana muuqata inay codadka ugu badan heleen afar xildhibaan oo kala ah Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Ibraahim Isaaq Yarow, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-Gareen iyo Shariif Maxamed Cabdalla. Afarta xubnood ee hela codadka ugu badan ayaa u gudbaya wareegga labaad. Afarta u gudubtay wareegga labaad ayaa codadka u […]
Pochettino oo mugdi geliyey mustaqbalkiisa Tottenham
Mauricio Pochettino ayaa sheegay in mustaqbalkiisa muddada fog ee kooxda Tottenham uusan gacantiisa ku jirin, islamarkaana ay quseyo gudodomiyaha kooxda Daniel Levy inuu saxiixo qandaraas cusub iyo in kale. Macallinka Spurs ayaa shaki geliyey msutaqbalkiisa kooxda toddobaadkii tagey markii ay Manchester United kaga adkaatay cayaartii afar dhammaadka koobka FA CUP-ka, markaasi oo uu yiri “Spurs […]
Mourinho oo rajayanaya inuu mar kale ka hortago Wenger
Jose Mourinho ayaa sheegay inuu rajeynayo in kulankii axaddii ay Manchester United 2-1 kaga adkaatay Arsenal uusan noqon kii ugu dambeeyey ee uu ka hortaggo Arsene Wenger. Kulankii ugu damabeeyey ee Arsene Wenger uu booqdo Old Trafford isaga oo ah macallinka Arsenal, ayaa ku billowday soo dhoweyn wanaagsan oo Sir Alex Ferguson uu u sameeyey, […]
Qaraxyo Ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kapul
April 30, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Qaraxyo Ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kapul
Isniin, April, 30, 2018 (HOL) – Ilaa 21 ruux ayaa lagu aramayaa in ay ku geeriyoodeen weerar Ismiidaamin ah oo goor dhaw ka dhacay magaalada Kapul ee dalka Afgahistan, waxaana dadka dhintay ka mid ah Afar Wariye. Saraakiisha ayaa gobolka ayaa sheegay in qaraxyada ay ka dhaceen Aaga Shashdarak oo ka tirsan caasimadda dalkaasi […]